Israel yakangouraya Tourism ne2 vhiki Yekuzvivharira Munhu wese
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Israel yakangouraya Tourism ne2 vhiki Yekuzvivharira Munhu wese
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • LGBTQ • nhau • Palestine Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Israeri, iyo nyika yekusika yakavhara miganhu yayo kune vekunze, kusanganisira vashanyi. Vagari vemuIsrael vanodzokera munyika vanofanirwa kupinda kwavo kwevhiki mbiri.
MuIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu akangouraya Israel Tourism. Wese munhu anopinda muJuda State achafanirwa kucherechedza Israeri kwemazuva gumi nemana ekuzvimiririra kurwisa coronavirus
Palestine Authority inorambidza vese vashanyi vekunze kwevhiki mbiri, yakavharwa machechi eBhetrehema uye mamoski ane makumi maviri neshanu akasimbiswa kesi dzehutachiona uye imwe muTul Karm. Zvizvarwa gumi nezvitatu zveUS zvakavharirwa mune imwe hotera yeBethlehem.
Sekureva kwechirairo kubva kugurukota rezvemukati meIsrael, Aryeh Deri, mutemo wekuisa wega wevaIsrael unotanga kushanda kubva na8 PM Muvhuro. Mutemo wekuti vekunze vasvike munyika vanoti vanofanirwa kuratidza kuti vane pekugara zvakakwana kuti vagariswe kwavo vega panguva yekugara kwavo munyika. Iwo mutero wevatorwa unozotanga kushanda kubva na8 PM China.
Mutungamiriri wehurumende, Benjamin Netanyahu akawedzera mvumo yekuzvidzivirira kune vese vanosvika munyika. Kuisa wega mirairo kunogara kwemavhiki maviri uye kunogona kukanganisa vamwe mazana matatu evaisraeri. Netanyahu akadana danho iri "rakaoma, asi rakakosha, sarudzo."
Pakutanga nhasi Israel Tourism vakatumira bepa kuburitswa ku eTurboNews vachiti Israel inogamuchira vashanyi uye vanga vakachengeteka kubva kuCOVID-19. eTN haina kuburitsa kuburitswa. Pakutanga svondo rapfuura Israel yakadomha nyika dzinoverengeka dzinosanganisira Germany, Italy, China, South Korea, Thailand.